प्रतिद्वन्दीलाई पनि विजयी भएको अनुभूति गराएर कांग्रेसलाई अगाडि बढाउँछु : राजु श्रेष्ठ « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १ : १८ बेलुका
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस यति बेला १४ औं महाधिवेशनको महासंग्राममा छ । कतिपय वडाहरुको अधिवेशन भइसेको छ भने कतिपय तयारी अवस्थामा छन् । अब जिल्ला हुँदै प्रदेश र संघमा आईपुगेपछि कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । त्यसका लागि पार्टीमा विभिन्न किसिमले योगदान गरेका नेताहरुले आफ्नो उम्मेद्वारी दिने क्रम जारी छ । यस्तैमा देशको राजधानी काठमाडौं जिल्ला सभापतिमा लोकप्रिय छवि बनाएका राजु श्रेष्ठले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । जित्ने मात्र नभइ हार्ने व्यक्तिलाई समेत साथमा लिएर पार्टीको लोप्रियतालाई चुलीमा पुर्‍याउने र देश तथा जनताको लागि राजनीतिक माध्यमबाट सवल र सक्षम बनाउन भूमिका खेल्ने लक्ष्य बोकेका श्रेष्ठसँग अनलाइनपानाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
मेरो उम्मेद्वारी पार्टीमा योग्य र योग्यता भएकाहरुलाई मौका दिनको निम्ति, आउदो नयाँ पिढीहरुलाई पार्टीमा समाहित हुने कार्यक्रमहरु ल्याएर पार्टीलाई सुद्रिढ गर्नको निम्ति र पार्टीमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु चलाएर वैचारिक रुपमा पनि सशक्त बनाउनको निम्ति र आगामी निर्वाचनमा दशै ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई काठमाडौं जिल्लामा विजय गराउनका निम्ति हो । मुलत: पार्टीमा राजनीति भन्ने कुरा पेशा होइन, यो सेवा हो । तसर्थ सेवामुखी राजनीति स्थापित गर्नको निम्ति मेरो उम्मेद्वारी हो । जुन मैले बिगतमा पनि गर्दै आएको कुरा हो । विभिन्न आपत बिपतमा परेकाहरुको उदारका निम्ति नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट हामीले क्षेत्र नं. ४ मा गर्दै आएरहेका नै छौं । पार्टीको योजना अनुरुप नै दश वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नै सामाजिक सांस्कृतिक एवम् धार्मिक कार्यक्रमहरु गरेर पार्टीलाई सशक्त बनाउन मेरो उम्मेद्वारी हो ।
तपाईंले भनेझै काठमाडौँको कांग्रेस चाहीँ कस्तो हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस पार्टीको काठमाडौं काँग्रेस भनेको एउटा गर्व गर्न लाएकको काँग्रेस हुनेछ । हामी पार्टीमा किन लागेका छौ ? यो राजनीति केका लागि हो ? त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । तरुण दल जस्तो युवा संघहरु, भातृ संस्थाहरु जसले आपत विपदमा काम गर्ने युवा शक्ति केका लागि हो त्यो कुरा पनि प्रस्ट गर्ने र महिलालाई अग्रपंतिमा राखेर महिला सहभागितालाई प्रोसाहित गर्ने र नेतृत्व पंतिमा ल्याउने युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउने र राजनीति भनेको केवल कुरा मात्र होइन काम हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने मेरो उदेश्य हो । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञलाई हेर्ने दृस्टीकोण त्यत्ति राम्रो छैन तसर्थ राजनीतिलाई मर्यादित बनाउने मेरो योजना छ । नेपाली काँग्रेस बिपी र गणेशमानले परिकल्पना गरेको पार्टी हो भन्ने अनुभूति गराउने पनि मेरो उदेश्य हो ।
गुट उपगुटको चर्चा एकदमै छ, तपाईं कुन गुटको उम्मेदवार ?
पहिलो कुरा त हामीले गुटको परिभाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो बिना लोकतान्त्रिक पार्टी अवरुद्ध हुन्छ । बहुदलिय व्यवस्थामा नेपाली काँग्रेसमा मात्र हैन सबै दलहरुमा गुटहरु छन् । तर ति गुटहरु कति मर्यादित र राजनीतिक संस्कारले सुसज्जित छन् भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । गुट भनेको आन्तरीक प्रतिस्पर्धा हो । राजनीतिमा पछिल्लो समय गुट उपगुट भन्दा पनि बिरासतको राजनीति गर्नेहरुको कारण लामो समय देखि पार्टीमा संघर्ष गरेकाहरुको योगदान छाँयामा परेको छ । पार्टीमा लामो समयदेखि मेहनत गरेका तर आफ्ना पूर्वजहरु पार्टीमा नभएका कारण आगाडी आउन नसकेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा गुट र बिरासत भन्दा पनि योग्य र योग्यताको कदर गरेर मूल्यांकनको परिपार्टी दरो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पार्टी भित्र विचार मिल्नेसंगको सहकार्यलाई गुट भनेर बदनाम गर्न भने मिल्दैन । म कुन गुटको भन्दा पनि नेपाली काँग्रेस काठमाडौंको सभापतिको उम्मेदवार हुँ ।
दलको नेता होइन देशको लागि सोच्ने राजनेता आवस्यक छ ।
तपाईंले आजसम्म काँग्रेस पार्टी भित्र गरेका कामहरु के के हुन् ?
हेर्नुस्, म कुनै पदमा थिइन । जतिबेला बिनासकारी भुकम्प आयो मैले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन नेपाल अधिराज्यभरि राहत वितरण र उदार गर्ने देखि पुननिर्माण गर्ने कार्य समेत गरेको छु । कोभिडको महामारीमा पनि हामीले जोखिम बहन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीवाट नभागी निरन्तर सेवा गरिरहयौ । आफु सुरक्षित भएर मात्र पुग्दैन हाम्रो कर्तब्य नागरिकलाइ सुरक्षित बनाउने हो भन्ने ठानेर सात वटा एम्बुलेन्स चलायौ, ऐँचोपैचो कार्यक्रम राख्यौ, औषधि वितरण, गर्भवती महिलाको उद्धार अक्सिजन सिलिन्डर वितरणदेखि विभिन्न किसिमका कोभिड रोकथामका कर्यक्रम गर्‍यौं । सम्पदा संरक्षण आभियान, खेलकुद, सामाजिक सांस्कृतिक एवम धार्मिक कार्यक्रममा जनचेतनाामुलक कार्यक्रममा म पदमा नहुदा पनि लागेको हुँ, जुन काममा मेरो निरन्तरता रहन्छ ।
काठमाडौंको सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा दुइ तिहाइको सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको छ । परिस्थितिको उपज भनौ जुन किसिमको अन्योलता र अस्थिरता छ त्यसलाई चिर्नका निम्ति पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने र राज्यलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसको हरेक नेतृत्व सर्वसम्मत हुन जरुरी छ । तर यसको मतलव भागबन्डा त होइन । त्यसकारण योग्य र योग्यता भएकाहरु पार्टीमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित हुनु राम्रो कुरा हो तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक संस्कारमा रहेर पार्टीको पद्धतिलाई जिवन्त राख्दै आगाडी बढ्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । सर्वसम्मत त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सबैले अपेक्षा राखेर उमेद्वारी दिनुभएको छ हेरौ लास्टसम्म हे हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा अबको काँग्रेस कस्तो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
काँग्रेस नेपाली जनताले विश्वास गरे अनुरुपको, बिपी र गणेशमानले पुर्‍याउनु भएको योगदानको कदर गर्ने खालको र आउने पिँढीहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप गर्व गर्न लायकको हुनुपर्दछ । योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेको हुनुपर्दछ जसले राष्ट्रलाइ सहि दिशातर्फ लैजान सकोस् ।
नेपाली काँग्रेसको अबको चुनावी रणनीति कस्तो हुनुपर्दछ ?
अब हामी सेवामार्फत जनतासँग जोडिनुपर्दछ । नेताहरुको फोटो देखाएर अबको चुनावमा जनताको मन जित्न सकिने अवस्था छैन । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहभागी भएर पार्टीलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा पनि जनहितका कार्यमार्फत नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको पार्टी बनाउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस बिना उन्नति सम्भव छैन भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउदै जनभावना अनुरुप सेवामुलक कार्य गर्न आवस्यक छ ।
नेपाली काँग्रेस भित्र अहिले देखिएको प्रमुख समस्या के हो ? यो गुट उपगुटको सामाधान के के हुन सक्ला ?
लोकतान्त्रिक पदतिमा गुट बन्नु ठुलो कुरा होइन । तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने हुनु पर्‍यो । योग्यता र योगदानको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ । सवल नेतृत्वको निम्ति गुटको फेरो समाउनु आवस्यक छैन । हाम्रो क्षेत्रमा गुट छैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । गुटको कुरामा म विश्वास गर्दिन । गुट उपगुटलाई गलत सावित गर्नको लागि पनि मेरो उम्मेदेवारी हो ।
एजेन्डा बिना निर्वाचनमा जाने नेपाली काँग्रेसको परिपाटीलाइ कसरी चिर्नुपर्ला ?
हामीले जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरा गरेपनि उक्त कुराहरु जबसम्म व्यवहारमा लागु गरिदैन तबसम्म उपलब्धि हासिल भएको मान्न सकिदैन । कम्युनिष्टहरु सैदान्तिक कुरा बढी गर्ने गर्छन् व्यवहारमा लागु हुदैन, तर नेपाली काँग्रेसले बीपीको आर्थिक क्रान्तिको परिकल्पना व्यवहारिक छ । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा जनताको समान पहुँच हुने गरि न्यायोचित वितरणलाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा नेपाली काँग्रेस पार्टी गम्भीर छ । भए नभएका हावादारी गफ गरेर जनातालालाई भ्रम छर्ने काम हामी गर्दैनौं ।
बिदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्काउन नेपाली काँग्रेसको भावी योजनाहरु के के छन्, आसन्न निर्वाचनका निम्ति उनीहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
विभिन्न कालखण्डमा हामीले राजनीतिक दल, आन्दोलन भनेर समय बर्वाद गरिसक्यौं । राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशले आर्थिक गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन । हिजोदेखि आजसम्म हेर्ने हो भने पनि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था भने कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो तर आर्थिक क्रान्ति भने कहिल्यै सफल हुन सकेको अवस्था छैन । जबसम्म हामी नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम् प्रयोग गरेर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दैनौ, तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन । धार्मिक पर्यटन र प्राकृतिक पर्यटनलाइ प्रवर्दन गरेर बिदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउन सकिन्छ । जसका लागि दलको नेता होइन देशको लागि सोच्ने राजनेता आवस्यक छ ।
तपाई काठमाडौंको सभापतिमा निर्वाचित हुने आधारहरु के के हुन् ?
१. राजनीति पेशा होइन सेवा हो तसर्थ मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
२. युवाहरुलाई राजनीतिमा स्थान दिन आवस्यक छ । युवा शक्ति नै देशको परिवर्तनको सम्बाहक हुन् ।
३. हामीले सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं सेवामुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले बिगत ३ बर्ष देखि निरन्तर रुपमा गर्दै आएको छु ।
४. बैचारिक रुपम पार्टीलाई सबल बनाउनका निम्ति युवाहरुलाइ आवस्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले आफ्नो तहमा गरिरहेको नै छु ।
५. समय अनुसार परिवर्तन हुने प्रतिस्पर्धीहरुसँगको सामना गर्नका निमित्त बौद्धिक सर्कलसँगको सहकार्य र परामर्श सहितको समिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन मैले अवलम्बन गरिरहेको छु । टोल टोलमा नेपाली काँग्रेस पुर्‍याउने काम गरिरहेको छु ।
तपाई पनि युवा हुनुहुन्छ, के अब नेपाली काँग्रेसमा पुस्ता हस्तान्तरण भएको हो त ?
युवा नेतृत्व समयको माग अनि आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तह देखि नै युवाहरु नेतृत्वमा आउनुले नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग फैलिएको छ । हुनत युवा भन्ने बित्तिकै सबै योग्य हुदैनन् तर समान धारणा राखेर योग्य र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । गुटको फेरो समातेर मात्र अघि जान सकिन्छ भन्ने गलत सोचको कारण योग्य व्यक्ति पछाडी छन् ।
यदि तपाई नेपाली कांग्रेस काठमाडौंको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईंको प्राथमिकता के के हुन्छ ?
म निर्वाचित भैसकेपछि मेरो प्रतिद्वन्दी जो हुनुहुन्छ, उहाँको योगदानको कदर गर्दै उहाँले पनि जितेको अनुभुत गराउनेछु । जसले व्यक्तिगत कुण्ठा साँधेर गुट र उपगुटलाइ प्राथमिकतामा राख्ने गलत प्रवृतिको अन्त्य गर्नेछु । महिला सहभागितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सेवा प्रति सदैव अग्रसर रहने छु । योग्य र सक्षम नेतृत्वका निम्ति म सँधै पार्टीको अनुशासन भित्र रहेर काम गर्नेछु ।
प्रकाशित : २८ भाद्र २०७८, सोमबार